Shiikh Xassan Daahir oo Fuulayo Diyaaradda u Qaaday Magaalada Muqdisho Asagoo Maxbuus ahayn!!
Sirdoonka Mareykanka iyo dalalka kale reer Galbeedka oo la baxay Sheekh Xasan Dahir Aweys Su,aalana Waydiinaya!!
Waxaa laga war dhawraya jawaabta Dowlada Soomaaliya ka bixin doonta balan furka lagu eedeeyay inay ku sameysay xubnihii suuragal ka dhigay Sheekh Xasan Dahir Aweys in laga soo kaxeeyo cadaado
Dagaalkii magaalada Kismaayo oo dib u bilaawday iyo xaalada oo aad u cakiran.
Wararka laga helaayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xooggan uu dib uga bilaawday magaaladaasi ayna xaaladu tahay mid aad u cakiran kadib markii shacabkii maalmahaan lagu dul dagaalamayay ay soo wajahday Qatar kasii dareysa.
Dagaalka maanta ayaa waxa uu dib uga bilaawday deegaanadii leesku hor-fadhiyay ee magaalada gudaheeda ahaa iyada maleeshiyaadka dagaalamaya ee daacada u kala ah Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale ay isu adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan, iyada oo qoysas aan bara kicin waayahaan oo fursada ay xaafadahooda uga baxaan waayay ay wali ku xanibanyihiin xaafahooda.
Ilo wareedyadu waxa ay sheegayaan in madaafiic ay ku dhaceyso gooba ka baxsan halka lagu hardamayo, iyada oo halkaasi ay wax ku noqonayaan shacab ka madax banan dirirta u dhexeysa labada nin ee wada sheeganaya madaxweynaha maamulka Jubaland.
Lama soo tabin wali koox guul darro kala kulantay dagaalka maanta, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in jiida hore ay gaarayaan gurmad labada dhinac ah oo doonaya in ay sare u qaadaan dagaalka si ay qolaba qolada kale uga guuleysato.
Taageerayaasha Col.Barre Hiiraale oo aad loo la yaabay & kuwa Sheekh Axmed Madoobe oo quus taagan (Warbixin) !!
Dagaalada ka socda magaalada Kismaayo ayaa durbadiiba waxaa Taaktiko ahaan xaafado badan lagu jabiyay maleeshiyaadka ururka Raaskanbooni ee uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe.
Taageerayaasha Col.Barre Aadan Shire Hiiraale ayaa si cad oo aanan qarsooneeyn ugu gacan sareeyay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana dhabar jabin cajiib ah lagu sameeyay ciidamada Sheekh Axmed Madoobe oo aanan si wanaagsan u kala garaneeyn xaafadaha magaalada Kismaayo maadaama intooda badan laga soo kala aruuriyay gobolo iyo degmooyin aad u fog fog.
Ciidamada Col.Barre Aadan Shire Hiiraale ayaa waxaa aad u caawinayay oo Biyaha iyo Raashinka ka daba waday dadka deegaanka kuwaas oo ugu dambeeyntii Liif iyo Toogasho raaxada uga qaaday Maleeshiyaadka ururka Raaskanbooni oo ugu dambeeyntii ku mar marsiyooday inaysan dagaalka wali si toos ah ugu wada jirin.
Koox loo Tababary Dab Damiska oo Maanta Tababar loo soo Xiray.
Wasiirka arrimah gudaha iyo amniga qaranka iyo gudoomiyaha gobalka banaadir ayaa maanta soo xiray tababar mudo 15 maalnood u socday koox loo tababaray dab damiska.
Tababarkan maanta loo soo xiray kooxdan loo tababaray ka hor taga qatarta dabka,islamarkaana ay ka qeyb galeen wasiirka arrimah gudaha iyo amniga qaranka oo uu wehliyo gudoomiyaha gobalka banadir ahne duqa magaalada muqdisho,saraakil sar sare oo ka tirsan ciidanka midowga afrika ee AMISOM oo tababarka bixinayay iyo mas’uulin kale ayaa maanta ka dhacday garoonka kubadda cagta ee muqdisho
Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (tarsan) oo ugu horeyn gobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inkooxdan loo tababaray dab damiska ay muhiimad gaar ah u leeyihiin gobalka banaadir,isagoo sheegay in arrintan ay qeyb ka tahay dadaalada la doonayo in lagu horumariyo gobolka Banadir.
wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Mudane C/ kariin Xuseen Guuleed oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa u mahadceliyay saraakisha ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee tababarka bixinaayay.
dhan kale wasiir arimah gudaha iyo amniga qaranka iyo gudoomyha gobalka Banaadir ayaa kor meer shaqo ku maray qeybo ka mid ah wadoonka dhax mara dagmada yaqshiid gar ahaan wada dheer ee gasha qabuuraha barakaad,halkaasi oo dayactir balaaran ay ka wadaan Ciidamada AMISOM
Magaalada Cadaado oo noqotay xarunta dhinacyada is-diidan ee dalka ay ku kulmaan si nabadi ku jirto(War-bixin)
Degmada cadaado oo hoos-tagta gobolka Gal-gaduud ayaa waxaa xiligaan ay xarun u tahay maamulka Ximin iyo Xeeb, waana magaalo la oran karo waxaa ay kulansatay dad Aaney Soomaaliya Suura gal aheyn inay is arkaan.
Warar soo baxayay ayaa sheegayey in Ahlusuna ay weerar ku tahay Deeganada Maamulka Ximin iyo Xeeb gaar ahan Cadaado oo xiligaan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys.
Cadaado oo kulansatay dhinacyada dalka isku haya awood ahaa iyo siyaasad ahaan ayaa waxaa xusid mudan in aysan ka dhicin wax dagaal ah oo dhex mara dhinacyadas iska soo horjeedo ee ku sugan Cadaado oo u badan dad isku heyb ah balse kala Koox ah.to edit.
Dowladda oo si kulul uga hadashay Dagaalka ka socda Magaalladda Kismaayo iyo Baaq loo diray labada garab.
Dowladda Somalia ayaa waxa ay ka hadashay Dagaalka iminka ka socda Magaalladda Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose.
Ridwaan Xaaji Cabdi waxa uu sheegay in Xukuumadda Somalia ay go’aano deg deg ah kasoo saari doonto Dagaalka Kismaayo ka socda isagoona Tilmaamay in Ujeedka dagaalka uu yahay in lagu xasuuqo Shacbiga.
War Deg Deg Ah Dagaalka Kismaayo oo Wali socda iyo Kooxda Raaskanbooni oo inta badan la wareegtay Magaalada
Wararka laga helaayo Magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in Dagaalka uu xoogsaday iyadoona leysu adeegsanaayo Hubka noocyadooda kala duwan.
Wararka nasoo gaarayo ayaa sheegaya in Ciiddamada Hoggaamiyaha Raaskambooni Axmed Madoobe ay gowr dhow la wareegeen gabi ahaan Deegaanadii saaka lagu dagaalamay, waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in ciidamada Axmed Madoobe ay hada gacanta ku hayaan inta badan Magaalada Kismaayo gaar ahaan Xaafadihii ay ku sugnaayeen Taageerayaasha Col. Barre Hiiraale.
Wararka ayaa sheegaya in Ciiddamadad Col. Barre Hiiraale ay iminka ku sugan yihiin xaafado yar oo katirsan Magaalada Kismaayo inta badana laga saaray goobihii ay xalay ila ashalay la wareegeen.
Dagaalka oo ah mid Khasaara ba’an uu ka dhashay ayaa waxaa lagu soo waramaya in Labada dhinac ee uu dagaalka u dhexeeyo ay iskala baxeen Magaalladda waxaana weli kacsan Xaalada Magaalada, iyadoona wadooyinka gudaha Magaalladda lagu arkayo Ciiddamo taabacsan Axmed Madoobe.
Isbitaaladda ayaa waxaa buux dhaafiyay Dhaawacyada Ciiddamadda labada dhinac iyo Dhaawacyada dadka rayidka oo ay wadooyinka ku haleeshay xabadda.
Saraakiil katirsan Dowlada ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ay dagaalka ka qeyb qaadanayaan ayna la jiraan dhinaca Raaskanbooni iyagoo duqeynaya goobaha ay joogaan Maleeshiyada taabacsan Barre Hiiraale.
Dowlada Mareykanka oo Shaaca ka qaaday in Saraakiil sar sare usoo dirayso Gudaha Soomaaliya.
Dowlada Mareykanka oo qorsheyneysa inay balaariso howlgalkeeda Meleteri ee ay kula dagaalameyso Ururada Xariirka la leh Al-Qaa’ida ee ka dagaalamaya Qaarada Africa.
Warka kasoo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in Saraakiisha Meleteriga Mareynkanka u qaabilsan Malitariga Africa ee Africom loo yaqaano ainay qaadayaan talaabooyin ay saraakiil ciidamo tababar ah ugu dirayaan wadamada Soomaaliya iyo Mali si tababar ay u siiyaan ciidamada labada dal kuwaasi oo laga damacsan yahay inay sii laba jibaaraan dagaalada ay kula jiraan kooxaha ka soo horejeeda.
Saraakiisha Mareykanka uu dirayo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan daraasiin saraakiil qaabilsan tababarka dhanka ciidamada ah.
Arintaan Mareynkanka uu shaaciyay ayaa ku soo aadaysa iyadoo Madaxweynaha Mareykanka Obama uu safar ku joogo mid ka mid ah dal Africa ku yaalo.
Warkaan ka soo Mareykanka ee lagu daabacay Wakaalada wararka ee Reuters ayaa dhanka kale waxaa lagu xaqiijiyay in hada ciidamo ka socdo Xukuumada Washitong ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah dalalka Africa kuwaasi oo shaqadooda lagu sheegay inay tababar ay siinayaan wadamada kaalmeynaya Soomaaliya iyo wadamada kale ee Africa qalalaasanaha ay ka jiraan.
Mareykanka ayaa taageeradan wuxuu ku micneeyay arimo badan oo ay ka mid yihiin in meesha laga Ururada Al-Qaa’ida xariirka la leh Al-Qaa’ida ee ay ka mid yihiin Al-shabaab iyo Boko iyo kuwa kale oo ka dagaalama galbeedka Africa.
Ciidamada Mareykanka la doonayo in loo soo diro Africa ayaa la geynayaan wadanka Jabuuti oo daris la ah Soomaaliya halkaasi uu Mareykanka ku leeyahay Xarun Meleteri oo laga dagaalamo dagaalyahanada Al-shabaa.
Warbixinta ayaa intaasi waxay ku dareysaa in ciidamadaan ay wehlin doonaan diyaaradaha Mareynkanka laga leeyahay ee droneska loo yaqaano.
Dhanka kale Mareykanka ayaa sheegay inuu xoojin dooni ciidamadiisa la dagaalanka Burcad badeeda Soomaaliya iyo sidii loo ciribtiri lahaa Kooxaha dhibaatooyinka ka wada xeebaha Soomaaliya iyo goobaha ka baxsan.
Wasiiro katirsan Xukuumada Somalia oo lagu wado in ay gaaraan Magaalada Cadaado si ay usoo afjaraan arinta Xasan Daahir.
Warar la helayo ayaa sheegaya in Maalinta Berito ah ama maalmaha soo aadan Magaalada Cadaado u duulaan Wasiiro katirsan Xukuumada Federaalka Soomaaliya si ay usoo afjaraan Arinta Sheekh Xasan Daahir Aweys.
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Xukuumada Federaalka Soomaaliya C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa la filayaa isaga iyo wafdi lasocda in ay gaaaraan Magaalada Cadaado maalinta Berito ama maalinta xigta si ay usoo afjaraan arinta Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ku sugan Magaalada Cadaado kadib markii uu kasoo baxsaday Shabaabkuu uu katirsanaa sida ay noo xaqiijiyeen ilo katirsan Xukuumada.
Xubnahan Dowlada kasocda ayaa qorshahooda yahay in Xasan Daahir ay Wadahadalo la furan sidoo kale usoo galbiyaan Magaalada Muqdisho si Dowlada Soomaaliya ay go’aan uga gaarto Mustaqbalka Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys oo in badan hurinayay Dagaalo looga soo horjeeday Dowladihii kala duwana aee Dalka soo maray.
Wafdi hordhac ah oo ka kooban Xildhibaano iyo Saraakiil katirsan Dowlada kana soo jeeda Beesha Habar Gidir ayaa xiligan kusugan Magaalada Cadaado kuwaa oo u kala dabqaadaya Sheekh Xasan Daahir iyo Dowlada Soomaaliya iyagoona Wadaadka ku qancinaya in Dowlada uu isku dhiibo si ay go’aan uga gaarto arintiisa sidoo kale cadeeyo Mowqifkiisa.
Lama oga sida ay ku dambeyn doonto Xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys oo habeenkii labaad ku hoyana Magaalada Cadaado kadib markii uu nafsadiisa kala baxsaday Kooxda Al-Shabaab uu mudo kamid ahaa kadib markii uu khilaaf soo kala dhax galay isaga iyo Saraakiil kale Hogaamiyaha guud ee Al-Shabaab Sheekh Muqtaar Abuu Zubeyr
Sheekh Xasan Daahir oo wali diidan in Dowlada loo gacan galiyo iyo Wadahadalo Xasaasi ah oo wali kasocda Magaalada Cadaado
Wararkii ugu Dambeeyay aan ka heleyno Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa sheegaya in halkaasi uu wali kasoconayo kulan Sadax geesood ah ay wada qaadanayaan Maamulka Ximin iyo Xeeb , Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo Wafdi maanta gaaray Magaaladaasi.
Kulanka ayaa ah mid looga arinsanayo Mustaqbalka Wadaadka Al-Shabaab kasoo baxsaday iyadoona Xubanaha kulanka ka qeyb galaya ay ku qancinayaan Sheekh Xasan Daahir in Dowlada Soomaaliya arintiisa lagu wareejiyo Muqdishana laga dajiyo.
Ilo kusugan Magaalada Cadaado kana qeyb galaya kulanka ayaa sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu wali diidan yahay in Magaalada Muqsisho laga dajiyo loona gacan galiyo Dowlada Soomaaliya waxa uuna ka codsaday Xubnaha kulanka ka qeyb galaya in Diyaarad Cadaado laga saaro una duulo Dalka Qadar si halkaasi magan galyo uga helo.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa sidoo kale diidan in uu Warbaahinta la hadlo uuna cadeeyoumada Soomaaliyeed Mowqifkiisa iyo waxa iska badalay tan iyo markii uu kasoo goostay Al-Shabaab , kulan dhoor mar lagu kala kacay ayaana Wali kasoconaya guriga uu Cadaado ka dagan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys waxaana wali soconaya qancinta Wadaadka.
Kulanka Cadaado kasocda waxaa ka qeyb galaya Xubno maanta Muqdisho ka dhoofay ay kamid yihiin Wasiirkii hore Arimaha Gudaha Soomaaliya Sheekh C/Qaadir Cali Cumar ,wasiiru dowlihii hore Gaashaandhiga Abtidoon, Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacade, Nabadoon Axmed Diiriye, Ugaas Cabdi Dahir iyo dad kale oo dhamaan kasoo jeeda Beesha Habar Gidir.
Kulanka hada kasocda Magaalada Cadaado ee u dhaxeeya Sadaxda dhinac ayaa la filayaa in saacadaha soo aadn go’aano kazoo baxaan laguna qanciyo Sheekh Xasan Daahir Aweys in Magaalada Muqdisho laga dajiyo si Dowlada loogu wareejiyo .
Rw Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo Wasiirka Horumarinta Xiriirka Caalamka ee dalka Norway oo qaatay kulan dhowr saac qaatay.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa kulan gaar ah la yeeshay Wasiirka Horumarinta Xiriirka Caalamka ee dalka Norway Heikki Holmes, waxayna ka wada hadleen arrimo ku aadan horumarinta xiriirka labada wadan.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay muhiimda ay leedahay sii xoojinta xiriirka labada dal ee soo jireenka ah. Waxaana uu si weyn uga mahad celiyay doorka suuban ee ay dawladda Norway ku leedahay dib-u-dhiska Soomaaliya.
"Door muuqda ayay dawladda Norway ku leedahay dib-u-dhiska iyo tayaynta hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya. Ayuu yiri Ra'iisal Wasaaraha oo sheegay in dawladda Norway ay dhaqaale aad u badan ku bixiso hawlaha dawladda Soomaaliya ayna hormuud ka tahay qorshaha lagu nidaaminayo maamulka dhaqaalada dalka Soomaaliya.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa ku amaanay dawladda Norway kaalmada tooska ah iyo taageerada ay u muujisay xiligan taariikhigaa ee isbadalka weyn ka dahcayo Soomaaliya. Waxaana uu tilaabadaas Norway qaaday ee geesinimada leh ku tilmaamay mid ku dayasho mudan, qeyb weyna ka ah xooojinta xiriirka bulshada caalamka iyo Soomaaliya.
“Waxaan ku faraxsanahay kaalmada tooska ah ee dalka Norway ay ku bixiso dib-u-dhiska iyo horumarinta dalka, waxaana rajeyneynaa in bulshada caalamku ay sidaas oo kale Soomaaliya u garab istaagaan ayna si toos ah noo taageeraan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo xusay in xukuumadu ay ku howlan tahay xasilinta dalka, dhinacyada siyaasada, dhaqaalaha iyo ammaanka.
Wasiirka Horumarinta Xiriirka Caalamka ee dalka Norway Heikki Holmes ayaa xusay inuu ku faraxsan yahay imaatinka dalka Soomaaliya, wuxuuna xusay in dawladdiisu ay si toos ah u garab taagan tahay ulana shaqeyn doonto dawladda Soomaaliyeed.
Daawo Sawirada "Odayaal iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Habar Gidir oo ku Qul qulaya Degmada Cadaado!!
Sheekh Xasan Daahir Aweus ayaa u muuqday intii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab katirsanaa nin ka maarmay beeshiisa hasa ahaatee hada Marka uu xaalkiisa soo xumaaday kana soo baxsaday Al-Shabaab ayuu u qeylo dhaansaday Beeshiisa kana codsaday Bad baadintiisa.
Hogaamiyaal katirsan Al-Shabaab oo isha ku haya Halka ay ku dambeyn doonto Xaalada Xasan Daahir si iyana ay go’aan u gaaraan.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa hada gacanta ugu jira Maamulka Ximin iyo Xeeb oo gacan saar iyo xariir fiican la leh Dowlada Soomaaliya, iyadoona wali ay kala cadeyn halka ay saldhigan doonto xaalada wadaadkan oo in badan kusoo jiray Dagaalo hasa ahaatee xiligan isaga oo baxsad ah Cadaado soo Magan galay.
Waxaa jira Hogaamiyaal kale oo katirsan Al-Shabaab aadna iskugu dhawaayeen Sheekh Xasan Daahir Aweys kuwaa oo wali iyana ku ganbanaya iyaga oo baxsad ah deegaano ay beelahooda awood ku leeyihiin iyagoona ka dhursugaya halka ay caga dhigato Xaalada Sheekh Xaabn Dahair si iyana go’aan u gaaraan ugana baxaan cariiriga hada ay ku jiraan.
Ragan sar sare ee katirsan Al-Shabaab siyaasad ahaana ay Sheekh Xasan Daahir isku dhawaayeen ayaa go’aan fiican qaadan doono hadii Sheekh Xasan Daahir si wanaagsan loola dhaqmo ama sida ay filayeen si ka duwan ,hadiisa ay arkaan in xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys in halis ku dambeeso waxa ay ku dadaali doonaan si ay dib ula midoobi lahaayeen Garabka ay hada baxsadka ka yihiin uu Hogaamiyo Amiirka Al-Shabaab.
Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo kamid ah Saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab kana mid ahaa Ragii ka baxsaday Magaalada Baraawe ayaa hada Jooga Deegaano katirsan Gobolka Bakool isaga iyo ciidamo badan oo wata kuwaa oo doonaya hadii xaalada kusii adkaato in ay Dhinaca Maamulka Dowlada ee Gobolada Baay iyo Bakool wada xaajood la galaan.
Abuu Mansuur ayaana wali go’aan gaarin waxa uuna isha ku haya Xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hada gacanta lagu hayo isagoona damacsan in uu go’aan gaaro marka uu Sheekh Xasan Daahir Aweys arintiisa meel u dhacdo.
Waxaa xusid mudan in Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur deegaanada uu kasoo jeedo aad looga Xushmeeyo maadaama uu in badan ka ilaaliyay in ay ka dhacaan dagaal dhiig badan ku daato taa oo keentay in Magaalooyin waa weyn ay ku jirto Baydhabo si nabad galyo ah uga baxaan lana wareegaan Dhinaca Dowlada si dadkooda aan loogu dul dagaalamin dhiig badana ku dadaan.
Waxaa sidoo kale Abuu Mnasuur xushmad u haya Siyaasiyiinta Gobolaad Baay iyo Bakool kuwaa oo uga mahad celinayaa xiligii Dowlada laga saaray Magaalada Baydhabo in Shabaab gacanta ku dhigeen rag sar sare uu ku jiray Xaabsade iyo Saraakiil Ciidan balse uu Abuu Mansuur Roobow uu sii daayay isaga oo siiyay dhoor tikniko ay kusii baxsadaan.
Si kastaba Khilaafka u dhaxeeya Hogaanka Al-Shabaab ayaa si cad banaanka ugu soo baxay iyadoona taasi ay kaliftay in la dilo qara kamid ah Sarakiisha Al-Shabaab halka kuwa kalana ay hada marba dhinac u cararayaan iyaga oo ka cabsi qaba labo dhinac oo kala ah Dhinaca Dowlada iyo Xulufadeeda iyo dhanka Al-Shabaab gaar ahaan garabka Amiirka Al-Shabaab.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa kamid ahaa Rag lagu daray Liiska Argagaxisada ah horeyna loo xayiray hantidooda iyo dhanka Socdaalka waxaana la ogeyn Go’aanka ay Dowlada Soomaaliya ka qaadan doonto iyo sida iyana ay uga hadli Doonaan Mareykanka iyo Qaramada Midoobay.
War Deg Deg Ah Yuusuf Indha Cadde iyo Sheekh C/Qaadir Cali Cumar oo Cadaado u duulay si arinta Sheekh Xasan Daahir u galaan.
Goor dhow oo barqanimadii ah ayaa waxaa garoonka dayuuradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka dhoofay xubno isugu jira, waxgarad, siyaasiyiin, saraakiil iyo xildhibaano, iyagoo ku sii jeeda degmada Cadaado oo uu shalay gaaray Shiikh Xasan Daahir Aweys.
Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayey sida wararku sheegayaan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Shiikh C/qaadir Cali Cumar waxaana ka mid ah xubno ay ka mid yihiin Jen. Yuusuf Siyaad Indhacadde Jen. Subxaanyo iyo odayaal kale waxaana tiradoodu ay gaareysaa illaa 30 xubnood.
Wafdigan oo markii hore loogu yeeray saxaafada si ay uga warbixiyaan socdaalkooda ayaa markii dambe diiday iney wax war ah bixiyaan, waxaana sii sagootiyey saraakiil uu ka mid ahaa taliyaha ciidamada nabad sugida gobolka Banaadir khaliif Axmed Ereg iyo xubno kale.
Sida ay sheegayaan warar hoose oo la helayo wafdigan ayaa waxaa diray dowlada Somalia si ay kulamo ula soo yeeshaan mamaulka Ximan iyo Xeeb ee gacanta ku haya Shiikh Xasan Daahir Aweys oo ka soo baxsaday Al-Shabaab.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xubnahan ay sidoo kale degmada Cadaado ka soo gelbin doonaan Shiikh Xasan Daahir Aweys si ay u keenaan magaalada Muqdisho saacadaha soo socda sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan wafdigaas oo si hoose ula hadlay dayniile.com
Daawo sawirada : madaxweynha maamul gobaleedka puntland Dr.abdirahman maxamed faroole lugu so dhaweyay magalada dubai ee dalka iskutaga imaratka carabta.
waxaa habeen xalay ahaa ka dhacay magalada dubai gar ahan grand hayat hotel xaflad se hersara ah taso lugu so dhaawey madaxweynaha maamulka gaboledka puntland Dr.abdirahman maxamed maxamud faroole oo horkacayay wafdi wafdigaas oo ka mid ah wasiirka arimaha gudaha C/laahi Axmed Jaamac Ilka- Jiir iyo general axmed saleeban dafle waxaa mesha kale oo ka maqneen qunsulka guud ee magalada dubai pr.omar madaxweynha faroole ayaa qudbadesa ku wajahneed midnimada somaliyeed iyo en la adkeyo faderalesemka iyo waxoo kale carabka ku dhuftay eney somali mid tahay waxoo kale oo shegay enaa lugu dhaqmo dastuurka somaliaya hada jiraa huraa loo wado lana dhameystero waxa kale oo ka dheman waxe kale mesha ku so bandhegeen kooxda dubai stars heeso wadani ah iyo kuwa so dhaweyn xafladaas kaso qeyb gashay dadweyne aad oo fara badan taso kakala yimadeen todobada gobol oo dalka imaratkaa ka kobanyahay kuna so dhamatay jaawe aad oo fican.
Waatan Waraaqda mucjisada dhigtay ee uu hogaamiyey safiirka Soomaaliyeed. Warqad ay hay'adan ay u dirtay Madaxwaynaha Soomaliya
Akhriso (Safiirka Ufadhiya Dalka Switzerland Yusuf Bari-Bari oo ugudbiyey Waraaq iyo eedoyin ka dhan Xukuumada soomaliya taas oo ka hadlayso Dhibaatada somalida Kuhaysato South africa)
Daawo Sawiri iyo Video - Xildhibaanka Wadanka Switzerland (Axmad Jaamac Foodball) oo Kusoo Qaban Qaabiyey Xafladii Taagerida Jubaland
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay Dowlada Goboleedka Jubaland iyo Madaxdooda ayaa lagu qabtay Magaalada Geneva ee Dalkan Swizerland.
Xafladaan Lagu Taageeryay Madaxweyne Axmed Maxamed islaan [Axmed Madoobe] iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Jubaland generaal Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil ayaa qabsoomideeda waxaa suura galiyay gudi ay ka mid ahaayeen Luul Maxamed Digriyow, Axmed Jaamacc Fidhbool iyo Xubno kale.
Xaflad oo ay ka soo qeyb galeen Soomaali aad u fara badan ayaa waxaa furay oo xariga ka jaray Luul Maxmed Digriyow iyo Axmed Jaamac Fidhbool.
waxaa sidoo kale qadka Telefoonka kaga qeyb galay oo la hadlay Dadkii Madasha ku sugnaa Madaxweyne ku xigeenka Dowlada Jubaland Generaal Admiraal Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Afhayeenka Dowlada Goboleedka Jubaland Cabdinaasir Seeraar .
Madasha oo eheed mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu soo bandhigay Qudbado Heeso, iyo weliba Ciyaaraha Hidaha iyo dhaqanka.Dhanka Madadaalada waxaa qeyb ka qaatay Koox Fanaaniin ah oo ay Horkaceysay Fananaada Saado Cali Warsame oo sidoo kale ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa Goobta Heeso Si aad ah loo jecleestay ku soo bandhigaeen Fanaaniinta kala Maandeeq Nuur , Cabdow Muuri,Fanaanka Yuusuf Yare, Abwaan Suldaan Cali Shire,Khadra Qalanjo iyo Fanaaniin kale.
Sidoo kale Waxaa Goobta qudbado ka soo jeediyay qaar ka tirsan Aqoonyahadii Madasha ku sugnaa:- oo ay ka mid ahaayeen Proff Maxamed Xareed Cismaan , Caaqil Cabdirisaaq Siciid Qotomo, yuusuf Aadan Xasan, Axmed Sheekh Maxamed Islaan, Fowzi Aadan Xadiis.
Xafladaan oo ay Xiriirinayeen Abwaan Suldaan Cali Shire,Catoosh Jabriil Ahmed, iyo Xasan Ismaaciil ayaa waxa ay ku soo dhamaatay Jawi aad u wanaagsan .
Ximin iyo Xeeb oo looga digay in ay magan galyo iyo amaan siiso Hogaamiye Sheekh Xasan Daahir Aweys
Madaxa Arrimaha bulshada ee Ahlusunnada gobalada dhexe, Sheekh Cabdi wali Xaaji Diiriye ayaa waxa uu digniin tii ugu danbeysay u diray maamulka Xibin iyo Xeeb oo iyagu baahiyay in uu gacantooda ku jiro Xassan Daahir Aweyn oo kamid ahaa sarakiisha sare ee Shabaab.
“Xassan Daahir Waa Shabaab. Cidii Gabaad siisana wa lamid oo waxaan ula dagaaleynaa sida Shabaabka. Waxa aan uga digeynaa Maamulka Xibin iyo Xeeb in ay ku dhiiradaan magen galyada Siyaasadeed oo ay siinayaan Xassan Daahir Aweys”, Madaxa Arrimaha bulshada ee Ahlusunnada gobalada dhexe ayaa ku waramay.
Hadalka Sarkaalka Ahlusuuna ayaa waxa uu soo baxayaa xilli saacado kahor Maamulka Cadaado uu shaaciyay in uu gacanta ku hayo ninka sida aadka ah loo doon doonayo ee Doonta uga soo baxsaday Baraawe kadib markii Axmed Cabdi Godane uu seefta gasha kala baxay si uu u marsiiyo cid kasta oo diida awaamirtiisa.
Maamulka Xibin iyo Xeeb ayaa iyagu waxa ay shaaciyeen in go’aan ka gaarida aayaha Xassan Daahir ay leedahay dowlada Federal-ka Soomaaliya ayna uga danbeyn doonaan ee iyagu aysan go’aanka laheyn.
Si kastaba, Soo goosashada Xassan Daahir ayaa waxa ay soo af-meereysaa in ka badan 7-da sano oo uu weday dagaal uusan marnaba ku guuleysan, iyada oo markasta oo uu niyada geliyo in uu madaxa soo taago ay dib u dhigayeen ururada uu ku jiro, iyada oo ay xusid mudantahay ururkiisii Xizbul Islaami in xoog ay ku bur-buriyeen Shabaab.
Daawo Sawirada Xuska 26-ka june oo lagu qabtay Madaxtooyada iyo Madaxda qaranka oo farxadooda kor u sida calanka dalka.
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusaamay 26-ka June oo ah xillgii ay xornimada qaateen gobalada Waqooyi ee dalka Soomaaliya ayaa xalay lagu qabtay Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada iyada oo ay ka qeyb galeen madaxda qaranka.
iyo dadweyn aad oo farabadan tase oo wajigoda ka muqatay farxad iyo malin qaran ene tahay kadib waxaa mesha lugu saray calanka somaliya markaas oo debad joog ahayeen madaxwenha dowlada somaliaya iyo saacid iyo jawaaari waxaa kale oo ka mid ahaa gotobyo kasocdaa ciidanka xooga dalka somaliyeed.